Baaritaanka askeriga Soomaali-Amerikaanka ah oo wakhti dheeraad ah u baahan | Maalmahanews
Baaritaanka askeriga Soomaali-Amerikaanka ah oo wakhti dheeraad ah u baahan
Image captionDacwad oogayaasha waxay sheegayaan in ay helayaan macluumaad badan oo la xiriira geerida Justine Damond.
Dacwad oogaha baaritaanka ku haya kiiska dilkii loo geystay haweeney u dhalatay Australia ayaa sheegay in shaqo dheeraad ah uu kiiska u baahan yahay, ka hor inta aan la go’aasan in dacwad lagu oogo askerigii toogtay haweeneyda.
Dacwad oogaha ayaa horay u ballanqaaday in go’aan uu gaarayo ugu dambeyn dhammaadka sannadka.
“Aad bay muhiim u tahay in si sax ah loo helo, halkii si degdeg ah loo gebagebayn lahaa,” ayuu warbixin ku yiri Dacwad oogaha Hennepin County, Mike Freeman.
Nin Soomaali ah oo loo dacweeyay ‘weerar argagixiso’
Muuqaalka waxaa ka dhashay walaac ay muujiyeen qoyska Ms Damond oo ku nool Australia. Waxay sheegeen in ay “aad uga walwalsan yihiin” in toogashada aan si sax ah loo baarin.
Maxamed Nuur wuxuu go’aansaday in baarayaasha uusan kala hadlin arrinta toogashada.